तिथि मेरो पत्रु »5तरिका टेक खाँचोमा नहुन
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सेप्टेम्बर. 12 2020 |2मिनेट पढ्न
कलर ID को दिन अघि, टेक्स्ट र सामाजिक मिडिया तपाईं सुरक्षित एक मान्छे गरेको डायल सक्छ पीछा (वा केटीको) नम्बर मा र फेरि आफ्नो औंलाहरु बटन थिचेर देखि ढीला भए सम्म. प्रविधिको आधुनिक चमत्कार आफ्नो हरेक कदम घोषणा संग, आफ्नो नाम र नम्बर आफ्नो सेल चार मा पप देखेर, पाँच वा त्योभन्दा बढी पटक एक दिन बन्द कुल बारी छ. यही पदहरू लागि जान्छ, इमेल र सामाजिक मिडिया सन्देश. योJohnDoe घन्टा हरेक घण्टा मा उहाँलाई tweets आफ्नो कराउनु बाहिर पढ्न वा तपाईं कहाँ सोच पाठ पछि पाठ प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेर छैन संभावना छ र तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ. यो वरिपरि उहाँलाई निम्न को प्राविधिक बराबर छ, लगातार आफ्नो काँध मा peaking.
आफ्नो साथी आफ्नो overdependence प्रविधी मा एक overdependence रूपमा आउँदै छ भने, यो लीन कटौती र खोल्नको समावेश गर्दैन एक गतिविधि गर्न मा कदम, tweeting, उहाँलाई निम्न सन्देश वा अन्यथा साइबर.
जिम मारो. तपाईं माथि र तल अण्डाकार समान रूपमा, आफ्नो क्षमता डायल गर्न वा पाठ मैला तारकीय देखि जानेछन्. तपाईं केहि खोल्नको योजना जबसम्म जस्तै बाहिर आउछ, "हू टी डब्ल्यू? तपाईं सख्त पकडनेवाला प्राप्त हुने सम्भावना छैन र आफ्नो कसरत समयमा सम्पर्क गर्न प्रयास "माथि Wgats. एक जोडी बोनस व्यायाम जाँदा तपाईं आराम गर्न मदत र डे-तनाव गर्न सक्छन्, आवश्यकता बनाउने डाउनहिल जाने खाँचोमा परेका हुन. तपाईं एक जिम सदस्यता छैन भने, रन आउट र एक बस आफ्नो खाँचोमा परेका व्यवहार टाढा प्राप्त गर्न प्राप्त छैन. एक पैदल लागि आफ्नो कुकुर बाहिर लिनुहोस्, आफ्नो छरछिमेकमा वरिपरि एक जोग लागि जाने वा आफ्नो स्थानीय पार्क मा बाइक पथ मारा. प्रमुख कुरा सम्झना गर्न: घर वा आफ्नो जिम लकर मा आफ्नो सेल छोड. तपाईं यो छैन भने, तपाईं यसको प्रयोग गर्न सक्दैन.
कसैको कल. एक तोकेका कलर रूपमा आफ्नो निहित साथीले नाम. तपाईं दोश्रो कल वा तेस्रो पाठ बनाउन हुँदैछ जब, तपाईं अझै पनि आफ्नो फोन उठाएर सक्छ - अन्य अन्त मा व्यक्ति आफ्नो मान्छे वा केटी होइन रूप मा लामो समय. आफ्नो मित्र तपाईं तल कुरा गरौं, आफ्नो जीवन मा तपाईं मान्छे को धेरै छ भनेर सम्झाउने तपाईं कम्पनी राख्न.
साइबर छैन डाँठ गर्नुहुन्छ. तपाईं आफ्नो Facebook पृष्ठ ब्राउज के भने केही पनि धेरै पटक, संभावना छ कि तपाईं यो स्पष्ट गर्नु नभएसम्म उहाँ जान्न कहिल्यै छौँ छन्. तपाईं उहाँलाई साँच्चै भरोसा भने, उहाँलाई माथि जाँच गर्ने कुनै कारण छैन 20 पल्ट एक दिन. आखिर, उहाँले तपाईंलाई यो देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने थाह हुँदा आफू र अर्को केटी को तस्वीरहरु पोस्ट गर्न शायद पनि बुद्धिमानी हुन्छ. त्यो स्मार्ट छैन भने, किन जसरी उहाँलाई संग तपाईं छन्? तपाईं आफ्नो सामाजिक मिडिया पेज को पनि धेरै झलक पक्रन के भने, निरन्तर टिप्पणी पोस्ट छैन. उहाँले, र आफ्ना साथीहरूलाई, तपाईं आफ्नो पृष्ठ हरेक पाँच मिनेट मा हुनुहुन्छ भनेर जान्नु आवश्यक छैन.
एक सेल sabbatical मा जानुहोस्. के तपाईं मा लीन छिर्न माथि गरौं शुरू हुनुहुन्छ भने, एक दिन आराम गर्न आफ्नो सेल राखे. यस असम्भव जस्तै देखिन्छ जबकि, मानव जाति मोबाइल फोन कहिल्यै हुन आए समयअघि मा पूरा गरे. तपाईँको फोन बन्द, एक सम्पूर्ण दिन मित्र र परिवार संग योजना एक दराज राखे र बनाउन.
शहर मारा. मित्र संग एक साँझ बाहिर योजना. तपाईं व्यस्त भोजन छौं गर्दा, नाच वा नवीनतम ब्लकबस्टर झटका हेरिरहेका, तपाईं आफ्नो प्रेम डायल वा लगातार उहाँलाई खोल्नको हुनेछैन. तपाईं आफैलाई पाउन भने आफ्नो फोन मा peaking, आफ्नो मित्रहरुलाई अन्य तरिका देख बेला एक छिटो पाठ मा प्राप्त गर्न चाहने, वर्तमान आफैलाई फिर्ता हान्ने.